Aqoonkaab Wadne Istaag | Aqoonkaab
Jan 26, 2019Caafimaadka
Somali badan ma kala taqaan (( Cardiac Arrest And Heart Attack )) Labadoodaba waxay u yaqaaniin uun Wadne Istaag lakin wey kala duwanyihiin xaga hoose ka akhriso Farqiga u dhaxeeya Wadne istaaga labadiisa nooc (( Cardiac Arrest And Heart Attack )) Iyo weliba Faaligaba.
# 1 Heart Attack
Wadne Xanuun ayunbu afsomali ku noqonayaa wuxuu dhacaa marka dhiigga oksijiinta leh ee wadnuhu soo bamgareeyo aanu soo gaadhin Wadnaha laftarkiisa qayb ka mid ah oo ay sababeen xidida wadnaha Oo Qaarkood Xidhmeen kuwaas oo sababa qayb ka mid ah muruqyadda Wadnaha aanay oksigiin soo gaadhin taas oo keeneysa inay qaarkood dhintaan.
Tani waxay kuu horseedi kartaa inaad dhimato, markaas si dhakhso ah ayaad ugu baahantahay inaad gargaar loo hesho si looga hortago inuu wadnahaaagu gebi ahaanba istaago . Ogow in marka uu qofku Heart Attack ku dhacaya ama uu markaas socdo wadnihiisa ma joojiyo garaaca.
# 2 Calaamadaha Heart Attack.
-Cuncun jidhka: xanuun qoorta, caloosha, dhabarka, daanka, iyo gacmaha, gaar ahaan dhinaca bidixda.
-Laab xanuun daran (angina)
# 3 wadne Istaag (Cardiac Arrest ).
Wadne Istaaga waa dhibaato koronto.
waxaana weeye nidaamka korantada wadnahaaga si lama filaan ah ayuu u noqdaa mid aan isku habaysnayn oo fowdo ah. Wadnaha waa unug koranto oo habeeya ama hagaajiya garaacista wadnaha iyo bambagaybta . Taasina waa sababta wadna garaaca oo aan caadi ahayn u horseedi karto wadne Istaag-ga. Tani, si ka duwan sida Heart Attack , waxay keenaysaa wadnaha inuu dhab ahaantii joojiyo garaaca markay korontadiii ka bakhtido.
#4 Calaamadaha wadne Istaag-ga.
– Xanuun ama kaar laabta ah
-Wadne garaac degdeg ah
# 5 Istaroog (stroke )ama Faalik .
Istaroog waa dhibaato maskaxeed. Waxaa jira saddex nooc oo istaroog ah:
1- Xidid Maskaxda ah oo xidhna (Ischemic Stroke)
2- Faalig yar ama sahlan a Transient Ischemic Attack “TIA” xidid maskaxeed si ku meel gaar ah u xidhma ka dibna furma isagoon wax dhibaato weyn ah ku keeninmaskaxda.
3- istaroog ku dhaca marka xididada maskaxda gudeheeda mid ka mid ah uu qarxo sababan in maskaxda qaybo ka mid ah dhiig ku furmo ka dibna ay dhaawacanto.
# 6 Calaamadaha Faaliga ama istaroogga.
– Hadal isku khaldid
-maskax Wareer , sida iyadoo la ilaawo magacyada , meelaha, iyo karti la’aanta in lala socdo wada hadalka
-Shaqo joojin ah , gacanta ama lugta, gaar ahaan hal dhinac
– Awood darro in la socdo
-Madax xanuun iyo matag
– Dhidid badan
Waxaan u rajaynaya inaa si wanaagsna u anfici doonto dadbadan oo ay iskaga khaldanayeen.
Diyaariye :Dr Cabdirashiid Maxamed
Next PostMaxaad Uga Baahantahay Inaad ka Ogaato Caabuqa(Infection)-ka.?